Anthony Joshua bụ onye gbara afọ iri atọ, nwetaghachiri nturu ugo okaibe nke mba ụwa ya dị iche iche ụbọchị Satọdee na mba Saudi Arabia ebe ya bụ asọmpi nọ were ọnọdụ. Anthony Joshua, bụ okwu akpụ n'ọnụ na mgba ahụ dịka o meriri onye otu ya si mba Mexico na agba karịrị iri na abụọ ha kụrụ ọkpọ.
Dịka ọ tụrụ ya n'anya ka Andy Ruiz si were merie ya ma nara ya nturu ugo ya ihe dịka ọnwa isii gara aga, Anthony Joshua kwuru na o zughị oke na ya onwe ya na-agba mbọ. Dịka o merichara Ruiz, o biri ya ọma ma kelee ya nke ọma. Ọ sị na abalị ahụ bụ abalị bụ ha ga-echeta.